Inona avy ny tsy fahavitrihan'ny chimie?
Ao amin'ny simia, ny teny tsy misy dikany dia manondro ny vatana izay mora vaky. Ny tsy fahampian-tsakafo dia lanjan'ny fomba mora vaky na fivoahana avy amin'ny dipoavatra mankany amin'ny sehatra gazy. Na izany aza, io fehezan-teny io dia azo ampiharina ihany koa amin'ny fiovan'ny vanim-potoana mivaingana amin'ny vovoka, izay sublimation . Ny tsiranoka tsy fahampian-tsakafo dia miteraka tsindry avo be amin'ny mari-pana iray, raha ampitahaina amin'ny fitambaran-javatra tsy misy loto .
Ohatra avy amin'ny volatile Substances
Ny fitaovana tsy misy dikany dia iray izay manana tsindry avo be.
Mercury dia singa mandoza. Misy tsiranoka mavesatra ny tsiranoka marefo, mora mamoaka particuli ao amin'ny rivotra.
Ny gripa maina dia singa tsy misy fery, izay mampitombo ao anaty setroka avoakan'ny tosi-drom-borona avy amin'ny vovon-tsolika ho vaky gazy karbonika.
Ny tetroxide Osmium (OsO 4 ), dia singa iray hafa tsy misy firaiketam-po. Toy ny ranomandry maina, dia mivoatra avy ao amin'ny vanim-potoana mivaingana mankany amin'ny vovon-tseranana izy nefa tsy lasa ranomainty.
Betsaka organika maro no tsy dia misy dikany. Ohatra ny alikaola. Satria mitsinkafona mora foana ny zavatra simika, mifangaro amin'ny rivotra izy ireo ary mety ho fofona (raha misy fofona). Xylen sy benzène dia vongan-doko roa miaraka amin'ny fofona miavaka.
Fifandraisana eo amin'ny fahavitrihana, ny toetrandro, ary ny fanerena
Ny avo kokoa noho ny fanerena ny vovo-tsiran-kevitra iray, ny tsy fahampiana. Ny tsindry etsy ambony sy ny fahavitrihana dia mandika amin'ny teboka manify ambany.
Ny fampitomboana ny hafanana dia mampitombo ny tsindry amin'ny vovoka, izay ny tsindry izay misy ny dipoasin'ny gazy dia mitovitovy amin'ny vanim-potoana matevina na matanjaka.
Famaritana ny fiovan'ny Enthalpy
Dative Cation definition
Famaritana ny asa ao amin'ny Chemistry
Famaritana diso sy Ohatra
Famaritana ny vondrona
Ahoana ny fomba hamahana baomba mandatsa-dranomaso miaraka amin'ny baikon'ny Ping Pong
Inona ny tantara Breaking News?
Atheismus sy Existentialism
Ny Ady Lehibe Faharoa: Ady faharoa tao El Alamein
Fiteny ampiasaina amin'ny taratasy
Top Stevie Nicks Songs of '80s Outside of Fleetwood Mac
Amin'ny fomba ahoana no tokony hametrahanao ny grenady amin'ny tennis?
Tokony hanana endrika fandaharam-pampianarana ho an'ny sekolim-panjakana ve ny design?
University University GPA, SAT sy ACT Data
Fiarahabana manokana amin'ny Andro manokana
Famerenana: Basil Urban Fold Bike Bag
Ahoana ny fomba hifidianana ny tsara indrindra amin'ny ranomandry fisakafoana
Datin'ny Emperora Romanina
Miverena amin'ny resaka fanadihadiana
Ny fanomezan'ny Necrophiliac
Lee Trevino Teny notsongaina: 30 goatselin'ny gulf sy ny fiainana
Azonao atao ve ny manomboka ny matso?
Ny fikomian'i Bacon
2008 Land Rover Range Rover Fanamoriana Fitsapana Fitsapana sy Famerenana
Famotopotorana ny feon-java-maneno eo ambanin'ny Hood
Porter, S'habiller, Se Mettre En ... Milaza ny "To wear" amin'ny teny frantsay
Crucigramas: Ataovy fampielezan-tsiansa ho an'ny kilasinao amin'ny teny espaniola
Echinoderms Round: Sea Urchins sy Dollars Sand